Archive du 13-oct-2020
Didalos Toy ny ahoana ny vehivavy tianao?
« Vidéo » nalainy ahitana azy mitantara blagy ka hiresahany momba ny « madelein» novidianny namana nasaina nitondra tsaky, no nahatonga ani Randimbiniombonana Rindramiarana na Didalos lasa be mpankafy sy mpanaraka ao anaty
Mafana ny andro Toy izao ny fikoloana volo, tarehy, hoho
Tsy mitovy ny fomba fikoloana ny endrika amam-bika nandritra ny ririnina intsony ireo fahazarana tokony hatao aminizao andro mafana sy manomboka manorana izao.
Inona kay no mahatonga ny lehilahy tsy hiraharaha ny vehivavy miaraka aminy ?
Tsy ny lehilahy ihany no manao io toetra io fa na ny vehivavy koa aza. Matetika manko, rehefa tia ny olona iray dia misisika, mitanaraka, miantso foana, maneho fitiavana be.
Ny didy 10 nny sakafo voalanjalanja
Toy ny ahoana izany hoe : misakafo voalanjalanja tsara izany ? atoronay anao :
Manakelikely ny ranjo Azo atao tsara ny manakely ny ranjo mba hanifinify. Ireto fotsiny no hatao :
Fampihetseham-batana voalohany sary 1 sy 2 Ahainga mifandimby ny lohan-tongotry ny tongotra havia sy havanana. Izay fihetsika izay no averina in-30. Manao andiany 3.
Mahafaty ny ratram-po !
Tena maharary ny fo, rehefa mamoy olon-tiana, na nisaraka io, na nodimandry. Tsy sarin-teny fotsiny anefa izany, fa tena miantraika aminny taova mihitsy ny tsy fahasalamana, rehefa misy fihetseham-po malahelo mafy ao anaty ao
Zaza tsy ampy fitiavana
Aminny ankapobeny , ny zaza ampy fitiavana dia mitombo aminny ara-dalàna aminny lafiny mahaolona azy , indrindra eo aminny lafiny ara-toe-po sy ara-tsaina.
Alatsinainy: Korzety sy toton-kena - 8.000Ar Akora ilaina Korzety -
1000Ar totonkena - 6.000Ar Voatabia sy tongolo - 500Ar Sakamalao sy tongolo gasy - 500Ar
liqueur chocolat sy coco, vita malagasy Holitiana no namorona azy
Portrait Mme Holitiana (tsy atao anaty papier ity soratra ity) Holitiana RAZAFINDRAMBALA Renim-pianakaviana 55 taona, niteraka vavy iray
Fiterahana atao « declenchement » : Tsy voatery handaitra!
Ny manodidina ny atao hoe : declenchement indray no horesahantsika.
Fivaviana nalalaka, azo teriterena !
Mampiova ny toe-batana tanteraka ny vohoka ary isanizany ny fahalalahanny fivaviana.
1. Diffuseur dencens  10.000Ar  Contact Page Facebook « Bihou »
2. Pack linge de table turquoise  Page Facebook « Tenderness Collections »  Contact : 034 52 076 51
ALANI MIKEA AO TOLIARA Tadiavina ny nanao ilay saribao 147 gony
Misy mitrandraka tsy miato ny alani Mikea ao aminny kaominina ambanivohitra Manombo Atsimo, distrikani Toliara II mba hanaovana harina fandrehitra na saribao.
AMBOHIBAO ANTEHIROKA Nahazo ivon-toerana handraisanireo zokiolona fisotroan-dronono
Raha anisanny nampitaraina fatratra ireo zokiolona hatraminizay ny fandehanana mamonjy ireny ivon-toerana fandraisana vola fisotroan-dronono ireny
Zanaki Black Nadia Namoaka hira
Namoaka ny hirany voalohany ilay zanaka lahimatoani Black Nadia, Black Sandrios. Vao herinandro izay no nivoahanity hira ity, mitondra ny lohanteny hoe: Anakidou.
Fisolokiana : Karohina ny talenny Orinasa Vaniala Export
Nivoaka ny taratasy fikarohana anatoa Iarimananirina Tilahy Fabio Marie Grazia, mpitantana ny orinasa Vaniala Export, omaly.
ANTSIRABE Ankizy tsy ampy taona 2, namaky trano
Zazalahy miisa efatra, eo anelanelanny 16 ka hatraminny 20 taona no tra-tehaky ny polisy avy namaky trano tao aminny fokontanin Ivory Antsirabe.
Coronavirus omaly Tsy nisy voa teto Analamanga
Araka ny tatitra nataonny Profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle, mpitondran-teninny foibe fibaikoana ny ady aminny valanaretina Coronavirus dia
Fampiakarana ny fahaiza-manao Nanaraka fiofana tany ivelany ireo tafika an-dranomasina Malagasy
Nisy ny fiofananana izay nandraisan'ny tafika an-dranomasina Malagasy anjara teny anivon'ny sekolin'ny tantsambo miaramila manana ny maha-izy azy any ivelany.
Fampitana mivantana ireo lalao ara-piralahiana hataonny BAREA Tsy miankina velively aminny TVM
Nitondra fanazavana taminny alalanny fanambarana mahakasika ny fampitana mivantana ireo lalao hataonny ekipanny Barea an iMadagasikara ny ORTM sy ny TVM omaly.
Karatra maha-matihanina Mpanao Gazety Nisintaka ny OJM
Nisafidy am-pahendrena ny hisitaka tanteraka aminny fanamboarana karatra maha-matihanina ho anny mpanao gazety, ny mpikambanny OJM raha ny naoty navoakanny holafitry ny Mpanao Gazety eto Madagasikara omaly.
ny tokony hatao isanandro
Fotoana isanny saropady ho anny vehivavy ny fitondrana vohoka. Aina 2 mantsy no koloina sy tandrovana.